Yemagariro Vatengi Sevhisi yeMarketeers | Martech Zone
China, June 19, 2014 Chitatu, June 18, 2014 Douglas Karr
Basa revatengi IS kushambadzira. Ndichataura zvakare… kushandira vatengi IS kushambadzira. Nekuti nzira yaunobata nayo vatengi vako inosimudzirwa pasocial media, ratings uye kuongororwa zuva rega rega, yako sevhisi sevhisi haisisiri chiratidzo chekugutsikana kwevatengi, kuchengetwa kana kukosha. Vatengi vako ikozvino ruoko rwakakosha kune ako ese ekushambadzira ekuedza nekuti vanogovana zviri nyore online.
Nepo Matimu Ekushambadzira aine chinangwa chekuwedzera ruzivo rwekuratidzira uye kutungamira chizvarwa kuburikidza nekuburitsa kunze ruzivo uye kugadzira kusangana kwakanaka, Vatengi VemaSevhisi Matimu ane chinangwa chekuvandudza kugutsikana kwevatengi uye kuwedzera kuchengetedzwa kwevatengi nekuteerera, uye kupindura kune zvinodiwa nevatengi. Kusangana kwevaviri kunowanzoonekwa sedambudziko pakati pemasangano mazhinji. Kunobva: Tsitsi
Nepo makumi matanhatu muzana emakambani achitenda vezvenhau inongova nzira yekushambadzira, ivo vari kufuratira kukwidziridzwa kwechiratidzo chavo kuburikidza vatengi vanotsigira kana vanoshora. Zvese zvinotora kudzikisira mwedzi kana makore ekushanda nesimba kuvaka chivimbo, chiremera, uye kubatana kwepamoyo nevateereri vako kuri kukanganisa chiitiko chimwe chete chakaburitswa nekusimudzirwa pasocial media. Unogona kupora zvinobudirira… is ikozvino chinhu chakakosha cheyako nzira yekutengesa.
Tags: kukurudziratsigiraMabatiro evatengimupikisikuchengetwakukurudzira munharaundakushamwaridzana nevatengi
iOS uye Android App Icon Photoshop Matemplate